QM oo ka digtay xaalada Soomaaliya - BBC Somali
QM oo ka digtay xaalada Soomaaliya
Image caption Xaalada cunto yarida Soomaaliya ayaa laga baqayaa inay ka sii darto.
Ku xigeenka wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, ahna xiriiriyaha howlaha bani'aadnimo Mr Philip Lazzerani, ayaa shirkiisa jaraa'id ee maanta uu ku qabtay xarunta Qaramada Midoobay ee Muqdisho.
Waxaa uu ku faahfaahiyay xaaladaha bani'aadinimo ee ka jirta dalka, isaga oo qeyla dhaan iyo digniin ka muujiyay cabsi laga qabo in macluul dalka uu dib ugu noqdo, hadii aan si taxadir ah looga hortagin ama lagu wajahin waxqabashada xaaladaha iman kara.
Wuxuu yiri "hadda waxaan heynaa qiyaastii 9 boqol oo kun oo dad ah oo si deg deg ah u baahan kaalmo banii'aadinimo. Wuxuu intaa ku daray inay ka mid yihiin 2 boqol oo kun oo caruur kuwaa oo ay da’doodu ka yar tahay 5 sanno jir. Waxa intaa dheer laba milyan oo dad ah ayaa waxa ay halis ugu jiraan cunto yari, kuwaas oo si fudud u gali kara xaalad deg deg ah hadii aan si dhaqso ah feejignaan taxadar leh loogu yeelan".
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay, in Somaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu sareeya ee carruurta ay heyso nafaqo darro toddobadii canug ee ay da’doodu ka hooseyso shan sano mid ka mid ah ayaa waxa uu hadda qabaa nafaqo darro bilow ah.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada sidoo kale ugu sareeya heerka dhimashada caruurta, tobankii canug hal ka mid ah ayaa waxa uu dhintaa ka hor maalinta dhalashadiisa, mid ka mid ah shantii canugba waxa ay dhintaan ka hor inta ayan gaarin shan sanno.
Sidoo kale waa mid ka mid ah waddamada ay ugu dhimshada badan yihiin haweenka xilliga umusha, waxaana warbixinadii ugu danbeeyay ay sheegayaan in 12kii haween ah ee wadanka ku umulaa, in mid ka mid ah ay xilliga foosha geeriyooto.
Waxa intaa dheer hal milyan oo qof ayaa gudaha ku barkacay, taas oo ka dhigeysa in Soomaaliya ay tahay mid ka mid ah waddamada ugu badan adduunka ee dadku ay barakaceen, waxaana uu ku xiga Suuriya iyo Koofurta Suudan, Soomaliyana waxaa ay noqonaysaa mid uu aad iyo u sareeyo heerka barakaca dadweynaha.
Lazzerani, ku xigeenka wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ahna xiriiriyaha howlaha banaaidnimo ayaa sheegay, in roobkii la filyay oo ka hooseeya heerka celceliska ee caadiga ah, Alshabab oo gooyay waddooyinkii sahayda iyo dagaalo soo cusboonaaday meelaha qaar in ay xaaladda sii adkeynayaan.
Waxa uu sheegay in xaalad cusub oo cudurka dabeysha laga helay gobolka Mudug, taasina ay kallifeyso in la sii dardargaliyo ciribtirka cudurka dabeysha, iyaga oo intaa karaankooda ah ku dadaali doono in ay tallaal gaarsiiyaan caruurta la gaari kara oo dhan.
Deegaano dhawr ah oo ka jira gobollada Koofurta iyo bartmaha Somaaliya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay carruur u dhimtay xaalado nafaqo darro.